Markaad wax iibsanayso dacas iyo kabo nooc kale ah, sida kabo ama xirmooyin, mid ka mid ah su'aalaha ugu badan ee dadku isweydiin karaan waxay ku saabsan tahay maaddada - gaar ahaan, waa maxay EVA? Keliya EVA waa kabo kabo leh faa'iidooyin badan taas oo ka dhigaysa saldhigga ugu habboon ee kabaha. Si fudud haddii loo dhigo, kelmada EVA -ga ayaa ah ...
Siyaasadda “xakamaynta laba -geesoodka ee isticmaalka tamarta”
Bartamihii bishii Agoosto, Komishanka Horumarinta Qaranka iyo Dib-u-habaynta wuxuu soo saaray xafiiska guud ee isticmaalka tamarta gobolka qeybtii hore ee 2021-ka oo ah barometer bartilmaameedka bartilmaameedka bartilmaameedka “, laga soo bilaabo hoos u dhaca xoogga isticmaalka tamarta, qeybtii hore ee sanadka, Qinghai, ...
Waxaan u jecelnahay kabaha si fudud. Si ka duwan sida kabaha loo xiro, kabaha ayaa cagaheenna ka siiya xorriyad ka -cidhiidhiga sanduuqyada suulka. Kabaha ugu fiican ee socodku waxay leeyihiin sagxado madal oo fudud si ay cagaha dhulka uga ilaaliyaan halka dushooda ay ahaadaan kuwo si nadiif ah loo muujiyo ama lagu xiro suumanka laga yaabo ...
TAARIIKHDA SIPPERS -KA
Aad bay u adkayd in la helo tafaasiil ku saabsan taariikhda dacasyada sida kabo gudaha ah sida aan hadda naqaanno oo aan xirno. Tanina waxay soo gaadhay goor dambe. Simbiriirixuhu wuxuu soo maray marxalado kala duwan wuxuuna dibadda ku xirnaa dhowr qarni. ASALKA DHIBAATOOYINKA Sibbiraha ugu horreeya taariikhda ayaa leh orienta ...
alaab ceyriin ah ayaa si waalan u kacda, warshadaha siibashada ayaa quusto oo adkaata
Mowjad cusub oo ah qiimaha sii kordhaya ee alaabta ceeriin ayaa si aad ah u garaacaya. EVA, caag, maqaar PU, kartoonno ayaa sidoo kale diyaar u ah inay guuraan, qiimaha dhammaan noocyada agabku waxay jebiyaan meesha ugu sarreysa taariikhda, oo ay weheliso mushaharka shaqaalaha “kor u kaca”, kabaha iyo silsiladda warshadaha dharka ayaa leh ...
EVA waxay kacday 2800/ tan, kooxdu waxay u kacdaa is xigxig
Toddobaadkii hore, Shiinaha Kiimikada Quanzhou EVA UL00628 ka dib lix wareeg oo dalab ah, qiimaha kama dambaysta ah ee 23700 yuan/ton, maalin keliya ayaa kor u kacday 2200 yuan/ton, 11%, waa qiime aad u sarreeya. Qiimaha suuqa EVA ayaa sidoo kale kor u kacay guud ahaan guddiga. Bishii Sebtember 3, xigashada Yanchang China Dhuxul Yulin Energy chem ...
Magaalada Jinjiang Neikeng waxay ku guuleysatay cinwaanka "Magaalada Kabaha Shiinaha, Magaalada Slippers"
Magaalada Jinjiang Neikeng waxay ku guuleysatay cinwaanka “Magaalada Kabaha Shiine, Magaalada Slippers” Waqti aan fogeyn, ururka maqaar shiine wuxuu shacbiga ugu dhawaaqay in cinwaanka astaamaha “magaalada kabaha Shiinaha, magaalada dacasyada” ay leedahay Jinjiang Neikeng Town, taas oo aan shaki ku jirin .. .